Waa kuma siyaasiga laga baafinayo Galmudug.? - Somnieuws.com
Waa kuma siyaasiga laga baafinayo Galmudug.?
Goobaha ay bulshadu ku kulmaan ee Magaalooyinka Dhuusamareeb & Guriceel waxaa si weyn looga hadal hayaa Wasiirkii hore ee qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Galmudug Cabdikaafi Maxamuud Qaaf, iyada oo ay soo kordhayaan dhalinyaro ku taageersan C/kaafi inuu ahaa shaqsi ka war-haya xaaladaha ay ku sugan yihiin qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan Galmudug.
Maamulaha Dugsiga hoose/dhexe ee Garaadso ee ku yaal Dhuusamareeb oo wareysi siiyay mid ka mid ah idaacadaha maxaliga ah ee Muqdisho ayaa ku amaanay Cabdikaafi inuu yahay aqoonyahay Galmudug-ta maanta ay u baahan tahay.
“Horumarka bulsho kasta ay gaarto meelaha laga qiimeeyo waxaa ka mid ah goobaha waxbarashada, caafimaadka & sida bulshadu isaga kaashato sugida amniga, C/kaafi isaga oo xil haya & isaga oo aan xil hayn wuxuu ahaa mas’uulka keliya ee ka war-haya goobaha waxbarashada & caafimaadka, goobahaas oo udub-dhexaad u ah horumarka bulsho kastaba. Wasiir Cabdikaafi Qaaf hadduu qaban lahaa xilka madaxweynenimada Galmudug waxaa xaqiiqo ah in Galmudug uu mideyn lahaa” Ayuu yiri Siciid Xassan Guuleed oo ah maamulaha Dugsiga Garaadso, isaga oo intaasi ku daray in Galmudug u baahan tahay qof u shaqeynaya ee aysan u baahneyn qof tiisa keliya u cadahaya.
Maamule Siciid Xassan waxaa kale uu sheegay in bulshadu tahay indha-ku-garaadle ayna garan karaan shaqsiyaadka horumarka ka shaqeynaya & shaqsiga ka shaqeysanaya.
“C/kaafi Qaaf, waa shaqsi ka dhiidhinaya, kana damqanaya dhibaatada bulshadiisa haysata, wuxuu aaminsanaa in Dagaalkii Guriceel ka dhacay laga maarmi karay, isku day kasta oo dagaalkaasi lagu baajin karayna wuu sameeyey dhinaciisa” Ayuu yiri maamule Siciid Xassan.
Goobaaha waxbarashada ayaa taageero weyn u muujiyay Cabdikaafi Maxamuud Qaaf, waana markii ugu horreeyey ee taageerada baaxadaasi la eg ay bulshada rayidka ah u muujiyaan shaqsi siyaasi ah.
“Galmudug uma baahna cid dusha looga keeno, ee waxay u baahan tahay shaqsi ka tarjumaya dareenka & baahida bulshada” Ayuu yiri mar kale maamule Siciid Xassan.
Who is the politician being tracked down in Galmudug?
Copyright © 2021 Somnieuws.com